China amandla ohamba aphezulu amandla aphezulu 65W uhlobo c pd usb itshaja PD65W ukwenziwa kunye nefektri | Staba Umbane
Amandla okuhamba aphezulu amandla aphezulu angama-65W uhlobo c pd usb kwitshaja PD65W
*Intlawulo ekhawulezileyo yePd 65W Iinkcukacha zeNkcazo
Itekhnoloji yakutshanje yeGaN: inikwe amandla yiGaN tech, itshaja yegan iba ncinane kwaye yonyusa ukusebenza ngokutshaxa ngelixa ivelisa ubushushu obuncinci. Itshaja ye-65W pd gan inamandla ngokwaneleyo okutshaja ngokupheleleyo i-15.4 ”yeMacBook Pro yakho kwiiyure ezi-2 kuphela.
Ixhaswe ngobuchwephesha beGaN, le tshaja yi-30% encinci kunezinye iitshaja, icwecwe kakhulu ukuhamba nawe naphi na apho uya khona. Le tshaja ye-65W PD ehambelana nokuhanjiswa kwamandla kwe-USB kuthetha ukutshaja ngokukhawuleza kwezixhobo zakho ezisebenza nge-USB-PD. Le tshaja yodonga lwe-USB isetyenziselwa ukuhambisa amaxesha ama-5 amandla eeshaja eziqhelekileyo kwizixhobo ezininzi ngaxeshanye. Ifaka uguquko lwamva nje kwitekhnoloji yokutshaja ngesantya esiphezulu, ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB-C kunye nokutshaja okuguqukayo okukhawulezayo, le tshaja inye kuphela oyifunayo ukuze unike amandla izixhobo zakho zangoku kwaye uhlale phambili kwigophe lazo naziphi na izinto zombane ezizayo.
Omabini la mazibuko anokuhambisa intlawulo yevolthi ephezulu kuyo yonke into esuka kwii-smartphones kunye neepilisi ukuya kwiilaptops ze-USB-C ezilambileyo ezinamandla njenge-12-intshi iMacbook. Ixhasa ukubiza ngokukhawuleza kwe-iPhone ukubiza i-iPhone 8 okanye kamva ukusuka kwi-zero ukuya kwi-50% kwimizuzu engama-30 ngentambo ebandakanywayo, kunye nezinye ii-smartphones / iipilisi ngesantya esiphezulu. Kwakhona kwi-chip ye-smart IC-I-chip ye-IC eqhubela phambili ibhaqa ngokuzenzekelayo kwaye ihambise amandla aphezulu okutshaja kwizixhobo ezixhumeneyo.
Isixhobo sakho sihlawula ngokukhawuleza okukhulu ngelixa ukhusela ubomi bakho bebhetri. (Iyahambelana zombini ukutshaja kwe-PD & QC). INkulumbuso kunye nePhathekayo-Amazibuko avavanyiwe ukumelana nokusetyenziswa okungaphezulu kwe-10,000 kwaye itshaja yenzelwe ukumelana nokutshaja okuqhubekayo ubuncinci beeyure ezingama-10,000, ukukunika umgangatho onokuthembela kuwo. Pd gan usb itshaja ngokuhanjiswa kwamandla okrelekrele, ukwandisa ukusebenza ngokukuko kwizixhobo ezizodwa okanye ezininzi. Yenzelwe ukuba isebenze kunye nokuveliswa kweekhompyuter kunye nezixhobo ze-smart, ukuvumela ukuqhelaniswa kweeplagi kunye nokutshaja ngokukhawuleza.
*Uhlobo lwe-C Pd Itshaja yefowuni Itshaja 65W Ipharamitha
I-USB-C1: 5V-15V / 3A, 20V / 3.25A; I-PPS: 3.3V-16V / 4A (Max 65W)
I-USB-C2: 5V-15V / 3A, 20V / 3.25A; I-PPS: 3.3V-16V / 4A (Max 65W)
I-USB-C1 / C2: 65W
I-USB-C1 + C2: (Max 60W)
Itekhnoloji yeGaN yohlobo C Pd Tshaja
Ukhuseleko lwePd ePhakamileyo yefowuni
Ihambelana ne-Pd GaN Usb Charger
Ukwabiwa kwaMandla okweNdawo yePd Wall Charger
Ngobuqili isasaza i-65W yamandla phakathi kwezixhobo ezi-3 xa itshaja ngaxeshanye kwaye ixhasa isantya esiphezulu ukutshaja ukuya kuthi ga kwi-65W xa isixhobo esinye sidityanisiwe, yitshaja yodonga efanelekileyo
Egqithileyo Isizukulwane samva nje esiphathwayo somthi ophathwayo iselfowuni itshaja yefowuni PD100W
Okulandelayo: Udonga olushushu olushushu olushushu kunye namandla aphezulu e-USB iadaptha eyi-65W